Dom » Galitaanada ku sumaysan "ai"
Microsoft waxay heshay Nuance. Qaddarku waa mid cajiib ah
ai, Microsoft, hooska, aqoonsiga hadalka, qoraalka
Shirkadda weyn ee teknolojiyadda ee Microsoft ayaa la wareegtay shirkadda Nuance oo ah shirkad soo saarta caqliga macmalka ah. Sida laga soo xigtay warbixinnadii ugu dambeeyay, qiimaha macaamil dhan wuxuu ahaa USD 19,7 bilyan. Thanks to tilaabadan istiraatiijiyadeed, Microsoft waxay kordhin doontaa qaybteeda horumarinta sirdoonka farsamada. Nuance ...
Cilmi baaris: dadku si aan sharci aheyn aaminaad sirdoon macmal ah. Xitaa haddii uu si cad u qaldan yahay
ai, sayniska ee Poland, si, sirdoon macmal ah
Xitaa haddii "sirdoonka macmal ah" ay u soo bandhigaan wax gebi ahaanba caqli gal ah, dadku si aan caadi ahayn ayey u aamini karaan - waxay ku tusaysaa prof. UAM dr hab. Michał Klichowski. Oo wuxuu u soo jiitaa indhaha baahida loo qabo in la barto fikirka adag - ...
Sirdoonka farshaxanka ayaa ka caawinaya dadka reer Japan shaqooyinka badan
ai, qorfe, Japan, sirdoon macmal ah
Japan waa wadan galay isbedel weyn oo qarnigii XNUMXaad. "Mucjisada Dhaqaalaha ee Jabaan" waa jumlad loo adeegsado laxiriirta guusha weyn ee uu dalkani gaarey Dagaalkii Labaad ee Dunida kadib. Laakiin markasta tani ...